Arsenal oo looga digay inay deg deg ku lumiso Cesc Fabregas & Robin van Persie – SBC
Arsenal oo looga digay inay deg deg ku lumiso Cesc Fabregas & Robin van Persie
Kooxda Arsenal oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka English Premiership-ka isla markaana bishii hore sadex koob laga reebay ayaa digniin lagu siiyey inay si deg deg ah ku lumin karto ciyaartoy laf dhabar u ah kooxda kuwaasi oo kala ah kabtanka iyo kuxigeenkiisa.
Patrick Vieira oo ahaa kabtan soo marey kooxda Arsenal isla markaana waayo wanaagsan la soo wadaagay Arsenal ayaa sheegay in hadii Arsenal aanay ku guulaysan koob oo ay ka baxdo abaarta gool la’aanta haysata ay taasi horsed ka dhigi doonto inay lumiso tag culus oo ay ugu horeeyaan Fabregas iyo Van Persie.
“Maalmahan waxaan la socdey xaalada Arsenal taageere ahaan, waan jeclahay qaab ciyaareedkooda, ciyaartoyda Arsenal-na waxay u ciyaarayaan sida ugu wanaagsan laakiin waa inaad taasi ku dartaa wax kale waxa muhiimka ahna waana niyada” ayuu yiri Vieira.
Vieira wuxuu sheegay in Arsenal ay soo mareen rag isagu uu ka mid yahay iyo Adams, Keown, Winterburn ama Parlour wuxuu sheegay in ragaasi ay qaarkood awood badan laheyn balse ay muujiyin karti dheeraad ah oo aanay muujin karin dadka kale.
Mar uu ka hadlayey Arsenal & Man United wuxuu sheegay in Arsenal aanay wali helin qofkii maskaxda ka dili lahaa Man United, isagoo sheegay inay caado ka dhigteen inay ku badiyaan 3 ama afar goo loo ay ku guuleystaan ciyaarta.